Igadi eyimfihlo-Igumbi labatshatileyo elineBalcony
Wamkelekile kwiGadi eyimfihlo - indlu yeendwendwe zemveli .. Yakhelwe ngo-2017 ukusuka kwizinto zendalo kuphela, i-guesthouse yethu ibonisa amagumbi avulekileyo azaliswe ngokukhanya kwendalo.
Amanzi ashushu afumaneka kwiipaneli zelanga, ngoko ke afumaneka lula.
Isidlo sakusasa sifakwe kwixabiso legumbi. Isidlo sifumaneka nge-10 €. Sitya isidlo sethu sosapho-isitayela sijikeleze itafile enye--siyalithanda ithuba lokuhlangana kunye nokuxoxa neendwendwe ezivela kwihlabathi jikelele!
Eli gumbi labucala, elijonge emazantsi linebhedi etofotofo egcweleyo, iwadilophu, kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Ukusuka kwibalcony yakho yabucala, yonwabela iimbono zegadi yemilambo kunye namawa aphezulu eTodra Gorge. Indlu yangasese ibekwe kwiholo ngaphandle nje kwegumbi. Kukho izindlu zangasese ezimbini ezisetyenziswayo phakathi kwamagumbi amane.
Imi ngaphandle kwendlela kumda weegadi zomlambo, iGadi eliseMfihlo inoxolo kwaye izolile. Yonwabela iimbono zeTodra Gorges ezinomtsalane kunye neendawo ezingqongileyo ukusuka kwibalcony yegumbi lakho okanye kuyo nayiphi na indawo yethu eqhelekileyo.
Ukusuka kwisiseko sakho kwiGadi eyimfihlo, ubekwe ngokugqibeleleyo ukonwabela ukukhwela amatye akumgangatho wehlabathi kumawa ekalika eTodra Gorge. Ukunyuka intaba, ukukhwela intaba, ukuhamba, kunye namathuba okukhwela ihashe nawo ayafumaneka. Sisebenzisa i-Aventures Verticales Maroc, ekuphela kwenkampani ekhokela imidlalo yeentaba esemgangathweni kwimiwonyo, kwaye siyavuya ukukukhapha kuhambo lwakho olulandelayo!
Eli likhaya lethu kwaye kuluvuyo lwethu ukwenza uzive ukhululekile kwaye "usekhaya" nawe!
Siqhuba inkampani yokukhwela kuphela e-Todra Gorge, i-Aventures Verticales Maroc, kunye no-Julio kuphela oqeqeshiweyo, umqeqeshi wokunyuka onelayisensi kwindawo. Siyavuya ukukunika lonke ulwazi ngemisebenzi yakho kwintlambo (ukunyuka, ukunyuka intaba, nge-ferrata, ukukhwela ihashe, ukukhwela intaba) okanye sikukhaphe kuhambo lwakho!
Siqhuba inkampani yokukhwela kuphela e-Todra Gorge, i-Aventures Verticales Maroc, kun…